Fikarohana momba ny firaisana Trangam-piarahamonina zaridaina Muslim any Mushir Ali | Naresh Kumar: raharaha momba ny fiainam-piainana taloha tamin'ny fanovana ny fivavahana avy amin'ny Silamo ho Hindu - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Mpikaroka: Satwant K. Pasricha, PhD, Associate of Ian Stevenson, MD
From: Afaka mihemotra lavitra ny fahafatesana ny saina, Volume 1, avy amin'i Satwant K. Pasricha, PhD
Ny Fiainana sy ny Fahafatesan'i Mushir Ali, Miozolomana Sonita
Mushir Ali dia niaina niaraka tamin'ny fianakaviany tao Kakori, tanàna iray ao amin'ny distrikan'i Lucknow ao amin'ny fanjakan'i Inda ao Uttar Pradesh. Ny silamo Sunni ny fianakaviany ary ny rainy, Haider Ali, dia tena fivavahana, nanolo-tena hivavaka ho an'ny hafa ary miaina ny fiantrana na ny fanomezana. Ny fianakaviana dia niresaka ny fiteny Urdu, izay mahazatra eo amin'ny mponina Miozolomana ao amin'ilay faritra.
Mushir Ali no mpamatsy sakafo voalohany indrindra ho an'ny fianakaviana, nivarotra legioma sy voankazo tany amin'ny tsenan'ny faritra. Tamin'ny marainan'ny volana jona 30, 1980, Mushir dia naka manga ho an'ny tsena tao Lucklow tao anaty sarety fiara iray izay nanofana azy. Kinanjo kely kilometatra 2 miala an'i Kakori, nifampitifitra tamin'ny mofomamy iray i Mushir ary nizaka ny ravina teo amin'ny ilany havanana amin'ny vatany ny sifodranon'ny soavaly, ary saika teo no ho eo ny ratra taminy. Izy no 25 taona fony izy maty.
Mushir Ali dia navaozina ho fianakaviana hindoa saingy mivavaka tahaka ny Silamo
Naresh Kumar dia teraka tamin'ny Febroary 1981, herintaona latsaka taorian'ny nahafatesan'i Mushir Ali, tao amin'ny tanànan'i Bazbagar, izay tao amin'ny distrikan'i Lucknow ihany koa. Guruprasad no anaran-drainy ary Bishwana no reniny. Ny fianakaviana dia Hindoa amin'ny kilasy antonony ambany. Teraka tamin'ny takaitra nahaterahana i Nasir, faritra ketraka akaikin'ny tratran'ny tratra, somary teo amin'ny ilany ankavanana.
Rehefa nanomboka niteny tamin'ny herintaona i Naresh dia nilaza ny teny hoe Kakori, ilay tanàna nipetrahan'ny Mushir Ali, ary kharkhara, izay midika hoe fiarandalambiera. Raha vao 2 taona izy, dia naneho fihetsika tsy mahazatra ho an'ny ankizilahy hindu i Naresh tamin'ny fandinihany ny fihodinan'ny fandoroana ary nilaza an'i Namaz, fomba fivavahana silamo. Ho nanao izany irery i Naresh ary raha hitany ny olon-kafa mijery azy dia hijanona izy.
Ny fiainana andavanandron'ny fiainana sy ny Xenoglossy-fiteny iray avy amin'ny fiainana mialoha
Noraisin'i Naresh koa ny filazana fiara mitondra fiara. Nofeheziny tamin'ny tady iray ny tadiny, izay natao toy ny sariolona, ​​ary niantsoantso toy ny hoe nandidy ny soavaly izy.
Ankoatra izany, i Naresh dia nandre ny teny Urdu, vitsy izay tsy niteny ny fianakaviany. Noho izany dia miteraka olana amin'ny xenoglossy izany, izay ahafahan'ny olona miteny fiteny avy amin'ny fiainany taloha izay tsy nianatra nandritra ny androm-piainany amin'izao fotoana izao.
Nizara ny Fahatsiarovana niainany tany am-piandohana i Naresh ary nahafantatra ny fiainam-pianakaviany taloha
Rehefa taona 4 izy dia nanazava bebe kokoa momba ny fiainany taloha i Naresh, tamin'ny filazana fa mitondra manga ao anaty sari-tsoany izy raha nifandona tamin'ny fiara ary maty izy. Ambonin'izany, nilaza izy fa Silamo nipetraka tany Kakori. Naresh dia te hiresaka momba ny fiainany taloha i Naresh ary hiresaka izany isaky ny manontany azy ny mponina.
Haider Ali, rain'i Mushir Ali, dia nandeha tany Bazbagar isaky ny Alakamisy mba hivavaka ho an'ny mponina ary hanangona fiantohana na fanomezana. Rehefa nianatra nandeha i Naresh, dia nanaraka an'i Haider Ali nanodidina ny tanàna izy ary nilaza fa rainy izy. Naresh mihitsy aza i Haesh Ali "Abba," izay midika hoe raim-pianakaviana, ary nilaza tamin'i Haider Ali fa te-hody any aminy izy.
Ny fianakavian'i Naresh dia nangataka fanampiana tamin'i Haider Ali, iza no mahasosotra, angamba noho ny tahotra ny fihetsiky ny fiarahamonina Silamo momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao.
Naresh dia nanindry fa ny fianakaviany dia hitondra azy any Kakori. Bishwana, renin'i Naresh, dia nanapa-kevitra ny hanontany an'i Haider Ali noho ny fanampiany, satria avy any Kakori, sy Silamo. Haider Ali dia toa tsy te-handraisany anjara ary nanoro hevitra an'i Bishwana hitondra an'i Naresh ho any amin'ny fasana misy ny silamo Miozolomana ao Mazar, mba tsy hitsahatra hiteny momba ny fiainany teo aloha ilay zazalahy. Ny fianakaviana dia nanao izany saingy tsy nisy fiantraikany izany, satria mbola nahafinaritra azy ny miresaka momba ny fiainany taloha. Naresh koa dia nisisika ny handehanana any amin'ny tranony taloha ary indraindray aza dia nanomboka nidina an-dalam-be mihitsy izy mba handeha any.
Dr. Pasricha dia nieritreritra fa amin'ny fotoana mety, Haider Ali dia mety mahafantatra fa nilaza i Naresh fa ny zanany lahy maty, Mushir Ali, no teraka, saingy natahotra hilaza zavatra izy noho ny ahiahy amin'ny fanakianana ny fiarahamoniny Silamo, izay tsy nino Reincarnation.
Nahita ny fiainany taloha i Naresh ary mamantatra ireo havana sy namana taloha
Guruprasad, rain'i Naresh, dia nanapa-kevitra ny hitondra azy any Kakori. Niaraka tamin'ny namana sasantsasany izy ireo. Indray mandeha tany Kakori, Naresh nitarika ny vondrona tao amin'ny trano nipetrahan'i Mushir Ali. Tao anatin'ilay trano dia nahitàna zavatra maromaro izay an'ny Mushir izy, anisan'izany ny kapa sy ny ao amin'ny Mushir's valizy.
Naresh ihany koa i Naresh ary nantsoina ho mpikambana ao amin'ny fianakaviamben'ny fianakaviamben'ny Mushir, havany ary namana. Nambarany ihany koa tamin'ny fianakavian'i Ali ny kaonty momba ny banky izay nananan'ny fianakaviany tamin'ny fotoana nahafatesan'i Mushir. Ankoatra izany, nanonona ny anaran'ny olona iray izay nanan-trosa tamin'i Mushir i Naresh, izay nohamarinin'ny fianakaviana. Nanampy ny fianakavian'i Ali fa io olona izay nanan-trosa io no nanavotra azy taorian'ny nahafatesan'i Mushir.
Reincarnation, fiainana taloha & lesoka teraka
Mifototra amin'ny famantarana sy fanambarana marina nataon'i Naresh, nanaiky an'i Naresh ho teraka tamin'ny taonjato maro ny Mushir Ali ny fianakaviana Ali, anisan'izany i Haidar Ali. Ho setrin'izany, Dr. Pasricha dia nihevitra fa ny fahaterahana niteraka an'i Naresh izay teraka teo amin'ny sisiny ankavanana teo amin'ny tratrany dia naneho ny hadisoana sy ny fivalanan-taolam-paty izay nipoiran'ny Mushir Ali tao amin'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty azy. (1)
Fiovana amin'ny finoana: Mushir Ali dia Miozolomana, saingy navaozina ho fianakaviana Hindoa.
Talenta sy fitondran-tena taloha: Amin'ny maha-zaza ahy, i Nary dia miondrika fa mitondra fiara mitondra soavaly izy. Ankoatra izany, dia nivavaka tamin'ny fomba silamo izy.
Fahatsiarovana jeografika: Indray mandeha tany Kakori, i Naresh dia afaka nitarika ny vondrona tao amin'ny fiainany taloha sy ny fianakavian'i Haider Ali.
Xenoglossy: Naresh miteny Nardu miteny Naresh, fiteny iray izay nampiasan'ny fiarahamonina Silamo, fa tsy tao amin'ny fianakavian'i Naresh. Araka izany, ity dia maneho tranga xenoglossy, izay fiteny iray hatramin'ny taloha dia voatazona amin'ny androm-piainany manaraka.
Reincarnation & Fahaterahana kilemas: Narès teo amin'ny rindrina nisy ny tratrany i Naresh izay toa nieritreritra ireo taolam-paty nipoiran'i Mushir rehefa namono sy novonoin'ny sambo iray.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nifanaraka tamin'ny fiainam-pianakaviany taloha i Naresh, fianakavian'i Haider Ali, izay nanaiky an'i Naresh ho ny fampodiana ao amin'ny vatana vaovao indray ny zanany lahy maty Mushir Ali.
1. Pasricha, Satwant K., Miala aina ny toe-tsaina ankoatra ny fahafatesana, Volana 1, Harman Publishing, New Delhi, 2008, pejy 159-161